प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७६, बुधबार २३:१५
काठमाडौं- रातको १२ बजे चोभारको एक खुला ठाउंमा राखिएको बिराज भट्टको कारमा एक्कासी आगो लाग्छ । छेउमै ठुला ठुला गाडी र डोजर छन्, अनि अर्को कुरो गाडीमा लागेको आगो छेऊमै एक व्यक्ति जल्दैछन् । छेऊ छाउमा धेरै व्यक्तिहरु छन् तर आगोमा जलेको व्यक्तिलाई बचाउन कोहि जांदैनन् किन ? अरु त गएनन् गएनन् हिरो बिराज भट्ट पनि उनलाई बचाउनुको साटो छेऊका अरुलाई मज्जाले पिट्दैछन् । अघि बताएको दृश्य र अहिले देखाएको कुराहरु सबै चलचित्र सांग्लो छायांकनका हुन् । बिराज भट्टले जय पर्शुरामपछि निर्माण गरेको चलचित्र सांग्लोको यतिबेला धमाधम छायांकन भैरहेको छ ।
बिराज भट्टले नै सांग्लोलाई निर्देशन गरिरहेका छन् । एक्सन प्याक, सस्पेन्स चलचित्रभित्र बिराजसंगै पुर्व मिस नेपाल निकिता चाण्डक, कामेश्वर चौरासिया आदिको पनि अभिनय छ ।
सेटमा बिराज भट्टलाई अंगालिरहेकी निकिताको यो पहिलो चलचित्र हो । यसअघि उनले डेव्यु गर्ने भनिएको चलचित्र रानी महलको छायांकन बिचमै रोकिएको थियो । तपाई मध्ये को को बिराज भट्टको चलचित्र सांग्लोको प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ ? कमेन्ट गर्नुहोला । बिराजले यस चलचित्रका लागि निकै मेहेनत गरेका छन् । समय सुहाउंदो कथामा बुलन्द एक्सन सहित लभ रोमान्स पनि समेटिने चलचित्र साग्लो नेपाली मात्रै हैन, हिन्दी भाषामा पनि निर्माण गरिदैछ । कसरी जल्यो कार, हेर्नुहोस